गुल्मीका संक्र`मित प्रधाना`ध्यापकको अव`स्था ग’म्भिर, भेन्टि`लेटरमा राखेर उप`चार हुँदै !!! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/गुल्मीका संक्र`मित प्रधाना`ध्यापकको अव`स्था ग’म्भिर, भेन्टि`लेटरमा राखेर उप`चार हुँदै !!!
गुल्मीका संक्र`मित प्रधाना`ध्यापकको अव`स्था ग’म्भिर, भेन्टि`लेटरमा राखेर उप`चार हुँदै !!!
बुटवल, ५ जेठ । गुल्मीका कोरोना भाइ`रस ९को`भिड९१९० पुष्टि भएका एक जनाको स्वास्थ्य अवस्था ग’म्भिर भएको बताइएको छ । जण्डिस र निमोनिया भनेर अस्पताल भर्ना गरिएका विरामीमा कोरोना पुष्टि भएको हो । रुपन्देहीको मणिग्राम स्थित क्रिम`सन अस्प`तालमा भर्ना गरिएका उनको स्वास्थ्य अवस्था ग म्भिर भएका कारण भेन्टि`लेटरमा उपचार गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसं`ख्या मन्त्रालयले सोमबार कोरोना पु`ष्टि गरेको गु`ल्मीका एक पु`रुषको स्वास्थ्य अवस्था ग म्भिर भएको हो । उनलाई ग म्भिर अवस्थामै अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनी मदाने गाउँ पालिका– ६ पुर्कोट दहका स्थानिय भएको बताइएको छ ।
जेष्ठ १ गते उनलाई ग म्भिर अवस्थामा नै अस्पताल ल्याइएको थियो । उनलाई निमोनिया भएको हुनसक्ने भन्दै चिकित्सकले आइसियुमा राखेर उपचार थालेका थिए ।
स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि भेन्टिलेटर ९कृतिम श्वासप्रश्वास० मा राखेर उपचार भइरहेको बताइएको छ । स्वास्थ्य अवस्था ग म्भिर हुँदै गएपछि उनको कोरोना परिक्षण गरिएको थियो । पिसिआर परिक्षणमा उनलाई कोरोना भएको पुष्टि भएको हो ।
शिक्षक पेशामा आवद्ध उनको ट्राभल हिस्टी नभएको बताइएको छ । उनी विद्यालयका प्रधानाध्यापक रहेको पाइएको छ। उनी केहीदिन पहिले देखिनै बिरामी थिए। ज्वरो आएपछि घरमै रहेका उनले स्थानीय क्लिनिकबाट ज्वरोको औ ष धि सेवन गरिरहेका थिए। तर केहीदिन औ ष धि खाँदा पनि सन्चो नभएपछि टाइफाइड भएको भन्दै उनलाई सन्धिखर्क पठाइएको थिए।
उनी ३१ गते आफन्तसँग मोटरसाइकलमा अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क गएका थिए।त्यहाँको अस्पतालले उनलाई ३१ गते राति नै एम्बुलेन्समा बुटवल रेफर गरेको थियो। अहिले प्रधानाध्यापकको घर सील गर्ने तयारी भइरहेको मदाने गाउँपालिकाले जनाएको छ।
खुसीको खबर,रसियापछि बेलायतले पनि को रोना बि रुद्धको भ्याक्सिन निर्मा णमा पायाे सफलता !
इजरायलमा ३० सेकेन्डमै कोरोना परी क्षण गर्ने यन्त्रको विकास
अमेरिकामा १२ नेपालीको शव व्यवस्थापनमा समस्या !!
थपिए २१० संक्रमित, कुल संक्रमित १९२७३ मध्ये १४०२१ जना निको भए